Harihar Khanal | Nepali Stories
Harihar Khanal – Sunaulo Sapana Ra Andhyaro Galli
हरिहर खनाल – सुनौलो सपना र अँध्यारो गल्ली
बिहान सबेरै उठ्नु पर्छ, पाँच बजेको हाराहारीमा। त्यति नगरे काममा समयमा पुगिन्न। समय घर्केपछि काममा जान राधेश्यामका लागि कत्ति पनि राम्रो लाग्दैन। ऊ ठान्छ, त्यसो गर्नु भनेको ठगेर खानु हो। ठगेर खानु र चोर्नुमा के अन्तर छ? ऊ त्यो अन्तर हेर्ने प्रयत्न गर्छ। एक हिसाबले ती दुवै उस्तै कुरा हुन्, नामका मात्र फरक। ऊ त्यस्तै ठान्छ। त्यसलाई त्यस्ता कुराहरू पटक्कै मन पर्दैनन्। त्यसैले अलिकति चाँडै उठ्नु परे पनि उसलाई त्यो कुराले कुनै असर गर्दैन। आधा घन्टामा त ऊ फ्रेस भैसक्छ। उसले लुगा लगाइ सक्तानसक्तै शकुन्तला उसको टेबुलमा एक कप तातो चिया राखिदिन्छे। हुन त ऊ एकाबिहानै शकुन्तलालाई उठाएर दुःख दिन चाहँदैन। त्यो काम भरसक आफै गरूँ भन्ठान्छ, तर आफैले चिया बनाएर नदिएसम्म शकुन्तलाको मन मान्दैन। हिउँद–बर्खा एकनासले काममा लागिरहनु कम पट्यारलाग्दो कुरा होइन। तर राध्येश्यामलाई त्यसको कामप्रति एक प्रकारको लगाव छ। त्यो बिना हिचकिचाहट, सधैं एकनासले तल्लिनतापूर्वक आफनो काममा लागिरहन्छ।
बिहान गाउँको पब्लिक क्याम्पसमा तीनवटा क्लास लिइसकेपछि ऊ पहिलो ड्युटीबाट मुक्त हुन्छ। नौ बजे घर पुगेपछि ऊ एकछिन त्यत्तिकै आराम गर्छ। राजु स्कुल जान थालेको यसपाली तीन वर्ष पुग्यो। त्यो स्कुल ड्रेसमा ठाँटिएर घरबाट निस्किएको दृष्य राधेश्याम र शकुन्तला दुवैजनालाई खुबै राम्रो लाग्छ। कहिलेकाहीँ त्यसकी बहिनी सिर्जना पनि दाजुसँगै स्कुल जान्छु भनेर उसलाई पछ्याउन खोज्छे। भर्खरै तीन वर्षमा हिँड्दै गरेकी सिर्जनाका लागि आमाको काख छाडेर स्कुलको बाटो लाग्न उसका लागि अझै कुर्नुपर्छ। तर राजुलाई भने त्यो झन्झट अब छैन। नर्सरी र के.जी. सजिलै पास गरेको उसका लागि स्ट्यान्डर्ड् वन् झनै राम्रो लागेको छ। अझ त्यो भन्दा पनि राम्रा उसका साथीभाइ छन् र त्यहाँको वातावरण छ। त्यसैले हुनसक्छ, स्कुल जाने भनेपछि ऊ सधैँ निकै रमाउँछ।
राधेश्याम दिउँसोको समयमा एउटा सरकारी क्याम्पसमा पढाउँछ। साँझ छिमेकी पब्लिक क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा कक्षा लिनका लागि भर्खरै नियुक्त भएको छ। क्याम्पसको कामबाट निर्लिप्त भएर घरतिर फर्कँदा घाम क्षितिजपारि लुकिसकेको हुन्छ। राधेश्याम आफ्नो काम, कर्तब्य र उठबसप्रति बढी नै सजग छ। झ48डै चार किलोमिटर परको क्याम्पसमा पढाएर फ््कर्कदासमेत ऊ साँझ आठबजे भन्दा ढिलो भएको अझसम्म रेकर्ड छैन।
शकुन्तला घर समाल्छे। राधेश्याम बाहिरतिर काम गरेर परिवारका लागि चाहारो जुटाउँछ। उसले उच्च शिक्षा हासिल गरेको छ। शकुन्तला चाहिँ इन्टरमिडियट पास गरेपछि अघि बढ्न सकिन। हलक्क बढेकी छोरी, राधेश्यामजस्तो एउटा होनहार युवक फेला पारेपछि उसका बाबु–आमाले नाइनास्ती गर्न सकेनन्। बिहेको लगत्तै उसले घर समालेर बस्नुपर्‍यो। त्यसपछि त्यसको अध्ययनमा ब्यवधान आइपर्‍यो।
राधेश्याम उसका समकालीन अरु युवक भन्दा भिन्दै प्रकारको एउटा होनहार युवक थियो। त्यसैले हुनसक्छ, शकुन्तला उसको जीवनमा आएको एउटा अलग्गै प्रकारको मोडमा उभिएर पनि ऊ खुसी थिई, सुखी थिई। त्यो त उतिबेलाको कुरा हो। त्यसपछिका दिनमा छोराछोरी र घरगृहस्थीले एउटा नयाँ बान्की लिइसकेका थिए। त्यसको सन्चालन र संबर्धनको रथ हाँक्ने सारथी स्वयम् शकुन्तला थिई। राधेश्याम त केवल आफ्नो कर्तव्यपथमा लागेको अर्जुन मात्र थियो।
तिनीहरूको एउटा सानो घर थियो, थोरै खेतिपाति थियो र सानु परिवार थियो। राधेश्याम इलममा लागेको थियो। एउटा प्रतिष्ठित पेशामा संलग्न थियो। गाउँघर र वरपर सबै मानिसहरू उसलाई आदरपूर्वक संबोधन गर्थे। मानिसहरूले कल्पना गरेकैजस्तो तिनीहरूको एउटा सुन्दर सन्सार, एउटा सुखी परिवार थियो। तिनीहरूको जीवन अरुहरूका लागि र तिनीहरूकै लागि पनि सुखी र सम्पन्न थियो। सम्पन्न यस अर्थमा थियो कि तिनीहरूका सीमित आकाङ्क्षा थिए। तिनीहरूसित जे थियो त्यसैमा सन्तुष्ठ थिए।
राधेश्याम आज सदाको भन्दा केही ढिलो घर फर्क्यो। सधैंको समयमा नआएपछि शकुन्तलाले ऊ आउने बाटोतिर आँखा बिछ्याई, धेरै बेरसम्म कुनै साइँसवद आएन। सधै सात बज्दानबज्दै आँगनमा मोटरसाइकलको घाइँघुइँ सुनिन्थ्यो, त्यो आज भएन। सडक दुर्घटनाका अवान्छित खबर दिनदिनै सुन्ने गरेका शकुन्तलाका कानले कतै आज पनि त्यस्तै क्यै सुन्न पर्ने त होइन भन्ठानेर त्यसको मन भित्रभित्रै असाध्यै तड्पियो। तर राधेश्याम हेलचक्य्राइँ गरेर सवारी साधन हाक्ने मानिस होइन भन्ने कुरा
उसलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले उसको मन अलिकति आस्वस्त भयो।
रातको नौ बज्न थालेको थियो। राजु र सिर्जना दुवै निदाइसकेका थिए, शकुन्तला भने टि.भी. हेरेर समय धकेल्ने चेष्टा गर्दै थिई। त्यसका आँखा टि.भी.को स्कि्रनमा भए पनि राधेश्यामको बरपरकै चक्कर लगाइरहेको थियो। बाहिर सडकमा एकाएक देखिएको उज्यालोले त्यसका आँखा त्यतै तान्यो। घरै नजिक आइपुगेपछि मोटरसाइकल उसको आँगनतिर सोझयो। बल्ल त्यसको मुटुको धडकन अलि शान्त भयो।
“कहाँ जानु भएको थियो यति अबेलासम्म?” आँगन टेक्न पाउँदानपाउँदै राधेश्यामको अनुहार ताकेर उसले सोधी।
“कहिलेकाहीँ कामको सिलसिलामा ढिलो भैहाल्छ नि।” मोटरसाइकल ग्यारेजतिर धकेल्दै राधेश्यामले उत्तर दियो।
“रातबिरात ढिलो आउँदा हामीलाई अत्यास लाग्दैन कि क्या हो? कि बिहानै खबर गरेर जानुपर्छ ढिलो हुन्छ भनेर।” शकुन्तला आत्मिय भावमा बोल्दै थिई।
“काम बन्लाजस्तो छ। आज त्यो मान्छेलाई भेटेर आएको।” खाना खाँदाखाँदै राधेश्यामले भन्यो।
“के काम?” कुराको केही भेउ नपाएझैं शकुन्तलाले भनी।
“त्यै क्या त्यै, एच्.एस्.एम्.पी.को काम।” राधेश्यामले अलिकति क्लु दिँदै भन्यो, “तनहूँतिरको एजेन्ट रहेछ त्यो। मान्छे पक्का छ रे। दाम लिएपछि काम पनि पक्का गर्ने।” उसले सम्झाउँने शैलीमा शकुन्तलालाई भन्यो।
एच्.एस्. एम्. पी, अर्थात् हाइली स्किल्ड् म्यानपावर। केही समयदेखि यस कार्यक्रम अन्तर्गत मानिसहरूको कल्पनाको स्वर्ग बेलायत जानका लागि पढेलेखेका मानिसहरूसमेत छँदाखाँदाको राम्रो जागिरलाई तिलाञ्जली दिएर दिलोज्यानले त्यतातिर लागेका थिए। सुरुमा अनिच्छा जाहेर गरे पनि साथीभाइको उक्साहटमा लागेर राधेश्यामले त्यसको मनलाई निकै चञ्चल बनाइरहेको थियो। केही दिन पहिले कुराको प्रसङ्गमा उसले शकुन्तलालाई पनि त्यो कुराको अलिकति शङ्केत गरेको थियो। शकुन्तलाले कुरा बुझी। राधेश्यामको अनुपस्थितिमा त्यसले घरब्यवहार कसरी चल्ला भन्ने कुराको लेखाजोखा गरी। त्यस्तो कुराको कल्पना गर्दा त्यो एक पटक भित्रभित्रै निकै डराई।
“पर्दैन भो त्यो अर्काको देशमा हेलिन। यहीँ ठीक छ हाम्रोलागि।” त्यसले अलिकति आत्तिएको स्वरमा भनी।
“ल हेर, तिमी पनि अहिल्यै हिँडिहाल्न लागेझैं गर्न थाल्यौ। पहिलो कुरा त हाम्रो प्रारम्भिक प्रयास हो यो। हुनका लागि त कता हो कता। दिल्ली धेरै टाठा छ। अहिल्यै किन आत्तिनु पर्‍यो?” राधेश्यामले
संझाउने प्रयत्न गर्‍यो।
मानिसले आँटेपछि त्यसलाई पुर्‍याउन ऊ हर सम्भव प्रयत्न गर्छ। राधेश्यामले शकुन्तलालाई जेजे भनेर फुल्याए पनि त्यसले उसको मुराद पुर्‍याएरै छाड्यो। विगत तीन वर्षदेखि खाइ–नखाइ गरेर संचित गरेको एक लाख पचास हजार रुपियाँ एजेन्टलाई बुझाएपछि उसको बाटोमा हरियो बत्ती बल्यो। काठमाडौं स्थित बेलायती राजदुतावासको भिसा सेक्शनले उसको प्रवेशाज्ञा मिलेको खबर गर्‍यो। त्यो खबरले राधेश्यामलाई निकै प्रफुल्लित बनायो।
प्रवेशाज्ञा मिलेपछि घर फर्केको राधेश्यामले शकुन्तलालाई धेरै कोणबाट सम्झायो। बेलायत पुगेपछिको समयको रुमानी कल्पना गरेर उसले शकुन्तलालाई एउटा सुन्दर सपना देखायो। केही वर्षभित्रै काठमाडौंमा एउटा राम्रो घर, एउटा गाडी र राम्रो बैङ्क ब्यालेन्स, त्यसपछिको सुखी जीवन। कल्पना गर्दिन भन्दाभन्दै पनि शकुन्तलाको मनको एक कुन्तरमा त्यस कुराले आकार ग्रहण गरिहाल्यो। छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउनेदेखि आफ्नो भविस्यको सुन्दर कल्पनाले उसको मनलाई निकै चञ्चल तुल्यायो।
भोलिपल्ट स्थानीय रुटमा चल्ने टेम्पो घर नजिकै पुगेपछि रोकियो र त्यसबाट राधेश्याम उत्रियो।
“मोटरसाइकल खै त?” उसलाई देख्ने वित्तिकै शकुन्तलाले सोधी।
“अब त्यसको के काम?” लगभग प्रशन्न मुद्रामा त्यसले भन्यो, “दिएर आएँ आज।”
“कसलाई? किन?” शकुन्तलाले फेरि प्रश्न दोहोर्‍याई।
“बेचें के। के गर्ने अब त्यो, आफू जाने भएपछि?” उसले त्यसरी नै भन्यो। शकुन्तलालाई भने केही हराएझैं, केही लुटिएझैं लाग्यो। त्यसको मन भित्रभित्रै कुँडुलियो। त्यसको अनुहारको भावसमेत फेरियो।
शकुन्तलाले बाहिर भन्दा हुन्न भने पनि त्यसको भित्री मनमा सम्भावित उज्यालो र सम्पन्न भविस्यको रेखा कोरिइसकेको थियो। त्यसले थोरतिन शङ्कालु भाव व्यक्त गरेकी भए पनि एक पटक गए जाउन् न त भन्ने नै ठानेकी थिई। त्यसैको आडमा यतिसम्म काम अगाडि बढिसकेको थियो। तर आज भने उसलाई निक्कै नरमाइलो लाग्यो। हिँजो–अस्तिको तुलनामा तिनीहरू दुवै कम बोलिरहेका थिए। दुवैको अनुहारको भाव–भङ्गिमा पनि प्रष्टै देखिने गरी फेरिएको थियो। राधेश्याम दराज र टेबुलका घर्रातिर रहेका कागजपत्र र अरु याबत् चिजलाई सुब्यवस्थित गर्नमा तल्लिन थियो। शकुन्तला खाटको डिलमा बसेर त्यो हेर्नमा व्यस्त थिई। राधेश्याम त्यसरी तल्लिनतापूर्वक काममा लागिरहँदा यता शकुन्तला भने उसको अनुपस्थितिमा घर–ब्यवहारमा आइपर्ने सम्भावित असजिला दिनहरूको कल्पनामा डुबेकी थिई। खुट्टो उचालिसकेको लोग्नेलाई रोक्न सक्ने त्यसले कुनै उपाय देखिन। त्यो प्रकट रूपमा उसको भावना पोखेर राधेश्यामको चित्त दुखाउन पनि चाहन्नथी। दोधार मनस्थितिमा रुमल्लिएकी शकुन्तला दिक्क मानेर खाटको छेउमा यत्तिकै पल्टिई।
सबै कुराको बन्दोबस्त मिल्यो। राधेश्याम हिँड्ने दिन पनि आइपुग्यो। घर छोड्ने समय जतिजति नजिकिँदै थियो त्यै अनुपातमा ती जोइ–पोइको मन पनि विचलित हुँदै गैरहेको थियो। तिनीहरूको मनमा पिरको जेजस्तो हुन्नरी मच्चिएको भए पनि प्रकट रूपमा भने तिनीहरूले एक–अर्कासित त्यो कुरा भन्न सकिरहेका थिएनन्। राजु र सिर्जना पनि निकै नरमाइलो मानिरहेका थिए। त्यस्तो समयमा राधेश्यामले तिनीहरूलाई अलिकति मिठाई र अलिकति पैसा दिएर फुल्याउने प्रयत्न गर्थ्यो।
बिदा हुने बेलामा शकुन्तलाले अलिकति आँसु बगाई। राधेश्यामले पनि त्यसको मन थाम्न सकेन। शकुन्तलाका आँखामा आँसु देखेपछि त्यसका आँखा पनि रसाए। उसले पनि अलिकति आँसु बगायो। त्यसपछि तिनीहरू दुवैले मनमनै बिदाइका हात हल्लाएर बिदा भए।
रातको आठ बजे उसको जेट विमानले गौचर एयरपोर्टको धावनमार्ग छाडेर आकाशको अँध्यारोलाई चिर्दै निरन्तर अगाडि बढ्न थाल्यो। राधेश्यामको विमान रातको निष्पट्ट अँध्यारोलाई चिर्दै आकाशमार्गमा हेलिएको थियो। उसलाई लाग्यो, ऊ पनि उसको बिमानझैं अँध्यारो भविस्यको अथाह गर्ततिर लगातार बगिरहेको छ। गैरहेको छ।
भोलिपल्ट बिहान स्थानीय समयअनुसार सात बजे ऊ ग्याट्विक बिमानस्थलमा उत्रियो। बिहानको कलिलो घाममा बेलायतको आकाश छ्याङ्ग खुलेको थियो। इमिग्रेशन पार गरेर आगमनद्वारबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै ऊ एउटा निकै ठूलो कभर्डहलमा पुग्यो। त्यसको दाहिनेतिरको लङमा मानिसहरू आफन्तहरूलाई रिसिभ गर्नका लागि आतुर भएर तिनीहरूका आँखा आगन्तुकहरूतिर बिछ्याइरहेका थिए। त्यो भीडमा उसले त्यसका आँखा फिँजाएर कुनै परिचित मान्छे देखिन्छ कि भनेर खोज्ने प्रयत्न गर्‍यो, तर बिरानु त्यो मुलुकमा एकजना पनि परिचित मानिस देखिएन। सुरेन्द्र मानिसहरूको त्यो भीडमा कतैतिर कुनै ठाउँमा उसको प्रतीक्षामा, उसलाई रिसिभ गर्नका लागि पर्खेर बसिरहेको भए कति जाति हुँदो हो? उसको मनको एक कुनामा यस्तो सोचाई आयो। “मैले उसलाई खबर गरेको भए ऊ पक्कै पनि मलाई लिन यहाँसम्म आउँदो हो।” यस्तो सोचेर ऊ भित्रभित्रै निकै कुँडुलियो। “मेरै सुद्धि उस्तै।” बिरानु ठाउँमा आउने भएपछि मैले आफै खबर गर्नु पर्ने। त्यसले आफूलाई आफै गाली गर्‍यो।
मानिसहरू आइरहेछन्, गइरहेछन्। ऊसले अब के गर्ने होला। कता जाने होला। केही भेउ पाउन सकेन। पकेट डायरीको एक छेउमा उसले सुरेन्द्रको फोन टिपेको थियो। आफन्तलाई लिन त्यहाँ पुगेकी एउटी नेपाली चेलीलाई देखेर त्यसको मनमा अलिकति आशाको त्यान्द्रो पलायो। ऊ त्यो नजिकै गयो र आफ्नु परिचय दिँदै सुरेन्द्रलाई भेट्न कुनै किसिमले सहयोग गर्न सक्छिन् कि भनेर सोध्यो। संक्षेपमा भलाकुसारी गरेपछि त्यो महिलाले त्यसको सेल फोनमा सुरेन्द्रको नंबर थिची।
“यस् प्लिज, सुरेन्द्र स्पिकिङ्।” फोनको पल्लो छेउबाट आवाज आयो।
“हेलो सुरेन्द्र, म राधेश्याम बोलेको।” राधेश्यामले सहज लवजमा भन्यो।
“को राधेश्याम।” अलिकति तटस्त भावमा उसले प्रश्न गर्‍यो।
“म क्या म। तिम्रो साथी राधेश्याम। नेपालबाट भर्खरै आइपुगें। ऐले ग्याटविक यएरपोर्टमा छु।” सुरेन्द्रले बुझहाल्यो। केही दिन पहिले फोनमा कुरा हँुदा बेलायत जाने प्रयत्न गर्दै गरेको कुरा राधेश्यामले उसलाई बताएको थियो। एकैचोटि बेलायत पुगेर उसले फोन गरेको सुनेर ऊ तीनछक पर्‍यो।
“ए, राम्रो। खुसी लाग्यो। बेलायतमा तिमीलाई स्वागत छ। सुरेन्द्रले औपचारिकता निभायो।
“सुरेन। मलाई लिन आउ न। म अलमलमा परें। तिमी कहाँ छौ?” राधेश्यामले अनुरोधको शैलीमा भन्यो। त्यसको कुरा सुनेर सुरेन्द्र छक्क पर्‍यो। तै पनि उत्तर त दिनै पर्थ्यो। उसले भन्यो। “हेर राधेश्याम यो सम्भव छैन। तिमीले आफू आउने दिन एकिन गरेर मलाई पहिलेनै किन जानकारी नगराएको? अहिले यतिबेला आएर तिमी एक्कासी लिन आउनु भन्दै छौ। यो सम्भब छैन। म सेन्ट्रल लन्डनको पश्चिमी भाग ओइम्लीमा बस्छु। यहाँबाट तिमी भएको ठाउँमा पुग्न मात्रै कम्तिमा पनि साडे दुई घन्टाको ड्राइभिङ् छ। त्यसैले यो सम्भव छैन। एनी वे। त्यहाँबाट तिमी ट्रेन समातेर आऊ। म भिक्टोरिया स्टेशनमा तिमीलाई पखर्ुँला। त्यहाँ पुगेपछि मेरो सेल फोनमा मलाई सम्पर्क गर्नु।” सुरेन्द्रले विस्तारमा भन्यो।
राधेश्याम बिलखबन्दमा पर्‍यो। त्यो भन्दा बाहेक अरु उपाय पनि थिएन। ऊ जसोतसो ग्याटविक टर्मिनलबाट बाहिर निस्कियो र ट्रेनको प्रतीक्षामा प्लेटफर्म कुर्न थाल्यो।
पहिलो पल्ट लन्डन टेकेको राधेश्यामका लागि हरेक कुरो नयाँ र नौलो थियो। कल्पना गरेभन्दा अलि फरक जीवनपद्धति र ब्यवहारको तौरतरिका। त्यो त्यसै निसासिएर बिलखबन्दमा परेको थियो। प्लेटफर्ममा स्वचालित मसिनबाट अरुले टिकट लिएको देखेपछि उसले पनि थोरैतिन सोधखोज गर्‍यो र ट्रेनको टिकेट लियो। प्रबेशद्वारमा रहेको पोलमा टिकेट छुवाएपछि ढोका खुल्यो र ऊ भित्र छिर्‍यो।
हरियो घाँसका मैदानहरू, हरियो रङ्गका बुट्यानहरू र हरिया फाकटहरू, ठाउँठाउँमा देखिने झुरुप्प परेका बस्तीहरू, क्षितिजसम्म छ्याङ्ग खुलेको नीलो आकाशको किनारालाई क्रमशः पछिल्तिर धकेल्दै पश्चिमतिर दौडेको रेल झ48डै दुई घन्टापछि भिक्टोरिया स्टेशनको १६ नंबर गेटमा पुगेर रोकियो। अरु यात्रुहरूका लहरमा मिसिएर राधेश्याम पनि त्यो आनन्ददायक यात्राको अन्त्य गर्दै तल झर्‍यो। नयाँ ठाउँको नयाँ परिवेश, अलिकति असजिलो महसुस गर्दै प्लेटफर्मका कुनाकाप्चा छामिरहेको राधेश्यामका आँखा विपरित दिशातिरबाट ऊतिरै आउँदै गरेको सुरेन्द्रमाथि परे। त्यसको अनुहार खुसीले धप्प बलेर उज्यालो भयो। एक अर्काका नजर जुधेपछि तिनीहरू झनै प्रफुल्ल भए र एक अर्कालाई अङ्कमाल गरे।
प्लेटफर्मबाट बाहिरिएपछि सुरेन्द्र पार्किङ् एरियामा राखेको उसको कारतिर बढ्रयो। राधेश्याम उसका पदचाप पछ्याउँदै गयो। सुरेन्द्रले नजिकै पुगेपछि रिमोटको स्वीच थिचेर कारको ढोका खोल्यो र ड्राइभिङ् सिटमा बस्यो। राधेश्यामलाई पछाडिको सिटमा बस्नका लागि ढोका खोलिदियो। वातानुकुलित कार निकै आरामदायी थियो। नयाँ ठाउँको नयाँ परिस्थिति र यावत् चिजहरूसित एकाकार हुन राधेश्याम प्रयत्नरत थियो। सुरेन्द्रले सेन्ट्रल लन्डनको मुटु चिर्दै खरानी रङ्गको त्यसको मर्सिडिज बेञ्जकार पश्चिम दिशातिर हुइँक्यायो।
इङ्गलिस च्यानलको पश्चिमपट्टि देखिने झलक्क हेर्दा बुटजुत्ता आकारको बेलायतको नक्साभित्रको वास्तविक धरातल देखेर राधेश्याम दङ्ग परिरहेको थियो। सफा चौडा सडकहरू, आवासक्षेत्रका एकैनासे घरहरू, प्रायः सुनसान लाग्ने बाटाहरू र केही किलोमिटरको अन्तरमा भेटिने ठूलठूला हरिया पार्कहरू। लन्डन पुगेको केही दिनसम्म सुरेन्द्रको पाहुना भएर बसेको राध्येश्यामले त्यहाँको वातावरण, आफ्नो देशको वातावरण भन्दा निकै फरक भएको पायो। धुवाँ छैन, घुलो छैन मानिसहरूको भीडभाड छैन। हल्लीखल्ली छैन। वातावरण नै विल्कुलै भिन्दै।
सुरेन्द्र बेलुकी रात निकै घर्किएपछि घर फर्कन्थ्यो र लगत्तै कम्प्युटरमा बस्थ्यो। त्यो भोक लागेपछि फ्रिज खोल्थ्यो र खाने कुरा झकेर माइक्रोवेभमा तताउँथ्यो, इच्छाअनुसारको ड्रिङ्क लिन्थ्यो र फेरि कम्प्युटरमा जोतिन्थ्यो। त्यो ओछ्यानमा पल्टिँदा मध्यरात कटिसक्थ्यो। त्यति बेलासम्म राधेश्याम भने मस्त निद्रामा सपना देखिरहेको हुन्थ्यो।
चार–पाँच दिन बितेपछि राधेश्यामको थकाई पनि पूर्ण रूपमा मेटियो। सुरुका केही दिनसम्म त्यसको समयमा केके नमिलिरहेकोजस्तो लागिरह्यो त्यसलाई। घाम आकाशमा माथिनै हुँदा त्यसलाई निद्राले छोप्थ्यो। बिहान भने ऊ सबेरै बिउँझन्थ्यो। सुरेन्द्र भने त्यति बेला निद्रामा मस्त घुरिरहेको हुन्थ्यो। सुरेन्द्र बिहान अबेला, लगभग दश बजेतिर उठ्थ्यो, बाथरुम पसेर फ्रेस भैसकेपछि किचेनतिर छिर्थ्यो र ब्रेकफास्ट लिएपछि फेरि उही पुरानो रुटिङ् पछ्याउँदै हतार–हतार बाहिर निस्कन्थ्यो र कार घुइँक्याएर कामतिर दौडन्थ्यो। आइतबार भने त्यसको ड्युटी अफ् हुन्थ्यो। त्यसैले ऊ त्यो दिन पूर्ण आराम गर्थ्यो। कहिलेकाहिँ बिदा मनाउन ऊ सी साइड जान्थ्यो। त्यो आइतबार उसले राध्येश्यामलाई सी साइड लिएर जाने योजना बनायो।
सेन्ट्रल लन्डनको बाहिरी किनाराबाट निस्केर सफा चौडा भीमकाय सडकमाथि बगिरहेको नदीजस्तै लाग्ने कारहरूको हुलमा मिसिएर तिनीहरूको कार पनि सडकमा बग्न थाल्यो। तिनीहरूले हरिया फाकटहरू, शहरजस्तै देखिने ससाना गाउँहरू, वनजङ्गलहरू र बाटामा पर्ने कैयौ कुराहरूलाई पछि धकेल्दै गए र झन्डै तीन घन्टापछि तिनीहरूको कार ब्राइटन पुगेर रोकियो। नीलो समुद्र अगाध जलराशीले भरिएर पृथ्वीको सतहमा ढलपल ढलपल गरिरहेको थियो। राधेश्यामले उसको जीवनमा साँचैको समुद्र देखेको त्यो नै पहिलो घटना थियो। त्यो त्यसको सुन्दरता देखेर मन्त्रमुग्ध भयो। समुद्रको किनारमा अर्धनग्न नरनारीहरू बेफिक्री सूर्य–स्नान गरिरहेका थिए। हेर्न पनि असहज नलाग्ने किसिमको थियो तिनीहरूको त्यहाँको अवस्थिति। राधेश्यामलाई त्यो सबै देखेर किन्चित असजिलो मशसुस भयो। तर कसैले कसैको कुनै वास्ता गरिरहेको थिएन। उसले पनि विस्तारै त्यसलाई सहज किसिमले लिने प्रयत्न गर्‍यो।
“सुरेन, तिमीले मलाई यहाँ जसरी आश्रय दिएर राखेका छौ त्यसका लागि तिमीलाई धन्यवाद छ। तर हेर भाइ, खाँदाखाँदैको जागिर र आफ्नो परिवार छाडेर यो सात समुद्र पारि आउने मेरो उद्धेस्य तिमीलाई
थाहा नभएको पनि होइन। म यसरी तिम्रो पाहुना भएर बेकारमा कति दिन बसुँ?” राधेश्यामले धेरै दिनपछि फुर्सतमा भेटेको सुरेन्द्रसित लामै गुनासो गर्‍यो।
“हेर राधेश्याम, तिमीले सुरुमा मैले भनेको पत्याएनौ। मानेनौ र मैले सुख्खै नपाएर तिमीलाई यहाँ आएको खन्डमा सकेको गरौंला भनेको हुँ। तर हेर, बेलायतमा रुखका बोटमा पाउन्ड र डलर फलेको सपना देख्ने तिमीहरूको सोचाई सत् प्रतिसत् गलत छ। हुँदाखाँदाको जागिर छाडेर नहिँड भनेकै थिएँ मैले। तिमीले मेरो कुरा सुनेनौ। कतै मैले तिमीलाई रोक्न खोजें कि भन्ठान्यौ। हेर्नकै लागि पनि तिमी यहाँ आउन खोज्यौ। अब तिमी यहाँ आइसकेका छौ र यहाँ के रहेछ त्यो देखिसकेका छौं। तिमी प्रोफेसर साहेब। तर तिम्रो त्यो प्रोफेसरी त्यहीँको लागि हो। यहाँ त्यसको कुनै अर्थ छैन। तिमीजस्ता मान्छेहरू यहाँ धेरै छन्। ती सबैले गर्ने भनेको म्यानुवल वर्कनै हो। त्यो पनि त्यति सरल छैन। अब तिमी त्यै पनि गर्न तत्पर हुन्छौ भने म तिम्रो लागि सानोतिनो काम खोज्ने प्रयत्न गरौंला।” सुरेन्द्रले राधेश्यामको अनुहारमा आँखा अड्याएर लामै भाषण गर्‍यो। राधेश्याम कोलको बीचमा परेर निचोरिँदै गरेको कागतीको गेडाजस्तै महसुस गर्न थाल्यो आफूलाई।
फुर्सतको समयमा जतिसुकै कुरा गरे पनि कामको समयमा भने सुरेन्द्र विल्कुलै फेरिएको रूपमा देखा पर्छ। ठीक समयमा उठ्ने, ठीक समयमा घरको काम भ्याएर ठीक समयमा जागिरमा जाने। त्यसको नियमित जीवन देखेर राधेश्यामसमेत आजकल यो ठाउँमा समयको कति धेरै महत्व रहेछ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन थालेको छ। उसले केही भन्न पाउँदा–नपाउँदै सुरेन्द्र तयार भैसक्छ र हतारहतार गाडी हुँइक्याएर घरबाट बाहिरिन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ राधेश्यामको त्यही एकाङ्गी जीवन। यन्त्रवत् घुमिरहेको घडीको लङ्गुरजस्तो समय। त्यो सबै हेरेर, भोगेर राधेश्याम त्यसै त्यसै वाक्कदिक्क हुन थालेको छ।
“भोक लागेको बेलामा तिमी आफै तयार गरेर खान सक्छौ।” उसको पाहुनाका रूपमा त्यहाँ बस्न पुगेको उसको साथी राधेश्यामलाई खाना खाने समयमा स्टोर र फ्रिजका खाने कुराहरू देखाउँदै
सुरेन्द्रले भनेको थियो।
जीवन यन्त्रवत् हुन पुगेको छ। काम क्यै छैन। साथीको घरमा पाहुना भएर बसेको छ। उठ्नु, खानु र सुत्नु। उसको काम नै त्यत्ति मात्र भएको छ। उसको साथी समय भएपछि काममा गैहाल्छ। घरमा बसिन्जेल पनि कि कम्प्युटरमा व्यस्त हुन्छ कि टि.भी.मा। बोलाएको बेलामा बोल्छ, बस्। तर झर्को मान्दैन। राधेश्याम भने अधिकाङ्श समय एक्लै हुन्छ।
उसलाई सजिलोे पनि छ, एक किसिमले हेर्दा। झन्डै बीस वर्ष पहिले बेलायत पसेको उसको
साथी सुरेन्द्र यतिबेला बेलायती नागरिक भैसकेको छ। उसका जहान–छोराछोरी सबै नै बेलायती नागरिक। उसको राम्रो ब्यवस्था छ। घर छ। स्वास्नी, छोराछोरी छन्। छोराछोरीको कलेजमा यतिबेला बिदा छ र यतिबेला तिनीहरू आमासँगै तिनीहरूको पुर्ख्यौली थलो घुम्नका लागि नेपालको भ्रमणमा पुगेका छन्। सुरेन्द्र भने उसको घर–ब्यवहार चलाएर बसेको छ। उसको ब्यवसाय भनेको त्यही रेष्टुरेन्ट हो। बेलायत पुगेको केही समयपछि उसले पनि घट्ट पिस्न सुरु गरेको थियो। एउटा इन्डियनको होटेलमा काम गर्दागर्दै केही वर्षपछि त्यो काममा त्यसले दक्षता हासिल गर्‍यो र त्यो अबधीमा केही दाम पनि जम्मा गर्‍यो। त्यसैको बलमा उसले वर्क् पर्मिट् पायो। त्यही नै उसका लागि स्थायी रूपमा बेलायत बस्ने एउटा माध्यम बन्न पुग्यो। केही समयसम्म अरुको कामदारका रूपमा बसेको उसलाई त्यहाँबाट सिकेको सिपले त्यै किसिमको काम गर्नका लागि निकै सघाऊ पुग्यो। अहिले ऊ त्यही प्रकारको आफ्नै काममा व्यस्त छ।
बिहान १० बजे घरबाट निस्केपछि सुरेन्द्र बेलुकी १२ बजेपछि मात्र घर पुग्छ। ऊ घर पुग्दा राधेश्याम मस्त निद्रामा परिसकेको हुन्छ। भोलिपल्ट बिहान धरतीमा भुक्भुके उज्यालो खस्न थाल्दानथाल्दै राधेश्याम बिउँझन्छ। यसो हेर्छ, देख्छ, वातावरण विल्कुलै निर्जन छ। 137यालबाट बाहिर हेर्छ। देख्छ, सडक सुनसान छ। वातावरण पनि विल्कुलै सुनसान छ। सडककिनारमा दुवैतिर निजी गाडीहरू लहरै पार्किङ्मा राखिएका छन्। नजिकै एउटा ठूलो अपार्टमेन्ट भवन छ। त्यो पनि सुनसान छ। अल्लि परतिर त्यस्तै प्रकारको अर्को अपार्टमेन्ट छ। होला, त्यसको प्रत्येक फ्ल्याटमा मानिसहरूले आफ्नो आवाद विस्तार गरेका होलान्। तर बाहिरबाट हेर्दा त्यो पनि सुनसान छ।
राधेश्याम बस्ताबस्ता वाक्क, दिक्क हुन्छ। सुरेन्द्रको बैठक कोठामा ठूलो फिलिप्स टि.भी. छ। त्यो निरस समयलाई धकेल्न ऊ रिमोट थिच्छ। बि.बि.सी.का मात्रै थुप्रै च्यानल छन्। न्युज च्यालन, इन्टरटेनमेन्ट च्यानल, पार्लियामेन्ट च्यानल आदि आदि। अरु पनि थुप्रै च्यानल छन्। तर ती कुनै पनि च्यानलले उसको मनलाई धेरै बेरसम्म स्थिर राख्न सक्तैनन्।
आज दिउँसो उसले एउटा होम कलिङ कार्ड किनेर ल्यायो र घरमा फोन गर्‍यो। राजु र सिर्जना सुतिसकेका रहेछन्। शकुन्तला पनि सुत्ने तर्खर गर्न लागेकी। सुरुमा सामान्य भलाकुसारी भयो। कुरा गर्दै जाँदा दुवैका गला अवरुद्ध भए। शकुन्तला त सुँक्कसुँक्क समेत गर्न पुगी। “आउनोस्, घर फर्कनोस्। कामै नपाएपछि कति दिन बेइलमी भएर बस्नु? क्यै बिग्रिएको छैन अझै। हाम्रो घर छ। जग्गा–जमिन छ। तपाइँको जागिर पनि यति चाँडै त गैसकेको छैन होला नि। सुख–दुख सँगै बाचौँला, सँगै मरौंला।” शकुन्तलाले राधेश्यामलाई सम्झाई। हो जस्तो पनि लाग्यो, तर उसले तुरुन्तै फर्किइहाल्ने कुरामा स्वीकृति जनाएन। त्यसको मन निकै आन्दोलित भैरहेको थियो। त्यति राम्रो तीन तीन ठाउँमा पढाउने काम छाडेर, भए भरको साँगा बिगारेर ऊ एउटा सुनौलो सपना बोकेर अनिश्चयको एउटा अँध्यारो गोरेटोमा टेकेर घरबाट हिँडेको थियो। गाउँघरको इतिवृत्त उसलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यहाँका मानिसहरूको प्रवृत्तिसित पनि ऊ पूरै परिचित थियो। अरुका कुरा काट्न पाउँदा तिनीहरू खुबै प्रशन्न हुन्थे। ‘ठूलो भाग खान गएको थियो, यी देख्यौ, दुई दिन पनि बस्न सकेन र फेेरि फर्केर आइपुग्यो।’ ऊ फर्केर घर गएको खन्डमा मानिसहरूले उसप्रति गर्ने टिप्पणी यस्तै हुनेछन् भन्ने उसले अनुमान गर्‍यो।
सुरेन्द्र उसको एकदमै मिल्ने पुरानो साथी भएको हुनाले आजसम्म उसलाई बस्न खानको कुनै समस्या परेको थिएन। उसले प्रेमपूर्वक भनेको थियो “तिम्रो काम नमिलेसम्म तिमी निसङ्कोच यहाँ बस। काम पाएपछि एउटा सुर गरौंला।” राधेश्यामलाई ढाढस दिँदै सुरेन्द्रले यसो भन्यो। तर त्यसरी कति दिन निर्बाह चल्नु? केही दिनपछि सुरेन्द्रको परिवार पनि नेपालबाट फर्कने छ। त्यसपछि उसको बसाई पक्कै पनि अहिलेकै जस्तो सरल र सुगम हुने छैन भन्ने कुराको कल्पनाले त्यो भित्रभित्रै झन् अत्तालियो। के खानु, बस्नु र सुत्नु नै जिन्दगी हो? उसले यसरी सोच्यो। उसले के सोचेर घरबाट हिँडेको थियो, अहिले के हुँदैछ त्यो देखेर राधेश्याम अत्यन्त पीडित भयो।
बस्ताबस्ता थकित भएको राधेश्याम खुट्टा तन्काउन भनेर घरबाट बाहिर निस्कियो। पाँच मिनेटजति हिँडेपछि ऊ एउटा पार्कको प्रवेशद्वार नजिक पुग्यो। “न्युटन इकोलोजिकल गार्डेन।” प्रवेशद्वारसँगै एउटा हरियो बोर्ड टाँगिएको थियो। प्रवेशद्वारबाट भित्र पस्ने वित्तिकै उसले देख्यो, देब्रेतिर एउटा ठूलो झाडी छ र त्यहाँ काला जङ्गली एैसेलु लटरम्म फलेका छन्। अल्लि परतिर हरिया स्याउ हाँगा लच्काएर तलतिर झुन्डिइरहेका छन्। सोझै अगाडि बढेपछि अल्लि परतिर एउटा ससानु चिल्ड्रेन पार्क छ र त्यो भन्दा पर निकै ठूलो जमिनको हिस्सामा किसिम किसिमका फूलका बिरुवाहरू र नर्सरीका ड्याङ् छन्। बीचमा प्लाष्टिकको दुईपाखे छानु भएको एउटा लामो ग्रिनहाउस छ। त्यति ठूलो संरचनाभित्र पनि मानिसको भने कुनै सङ्केत छैन। केही चराहरू चिरविर गर्दै रुखको एक हाँगादेखि अर्कोमा भुर्र उड्दै गएको देखिन्छ। बस्। त्यो भन्दा केही छैन। विल्कुलै निर्जन। त्यो निर्जन ठाउँमा बस्न त्यसलाई झन् अत्यास लागेर आयो। त्यो त्यहाँ पुगेको केही समयपछि एउटा कुइरे युवक त्यै बाटो भएर लमकलमक गर्दै अगाडि बढ्यो। त्यो त्यसरी जाँदा नितान्त आफ्नै धुनमा थियो र त्यसले यताउता हेर्दासम्म हेरेन। त्यो निरस ठाउँका मानिसहरूको जीवनशैली , शिष्टता र संस्कृति देखेर त्यसलाई झनै दिक्क लाग्यो। उसको गाउँघरमा भएको भए त्यसरी बाटोमा भेट भएको अपरिचित मान्छेले पनि कुनै न कुनै बहानामा उसित
कुरा मिसाउँथ्यो र बाटो लाग्थ्यो। यहाँ त्यो आत्मियता खै? बेलायतको जीवनपद्धति देखेर त्यसैत्यसै दिक्क लागेर आयो उसलाई।
सुरेन्द्र साबिकसरह त्यै समयमा घर फर्क्यो। ऊ घरभित्र छिर्दा सधैँ ओछ्यानमा मस्त निदाइरहेको हुन्थ्यो राधेश्याम, तर आज भने ऊ कम्प्युटरको स्कि्रनमा जब् अपर्च्युनिटीका बिज्ञापनहरू हेरिरहेको थियो। सुरेन्द्रले उसको अनुहार पढ्यो र मनस्थिति पनि बु137ने प्रयत्न गर्‍यो। एकैछिनको नीरिक्षणपछि, ऊ आज धेरै मुडअफ छ भन्ने कुरा उसले सजिलै अनुमान लगायो।
बाथरुमबाट फ्रेस भएर किचेनमा पसेको सुरेन्द्रले फ्राइड प्राउन, बदाम र चिकेनका परिकार अनि स्याम्पेन् लिएर बैठकमा भित्रियो।
“सुन साथी, आज अलिकति इन्ज्वाय गरौं। भोलि मैले मेरो ड्युटी अफ् मिलाएको छु। हामी भोलि कतै घुमौला। आज तिम्रो विषयमा अलिकति सोचेर पनि आएको छु।” अन्तर्मुखी स्वभावको सुरेन्द्र आज अलिकति बढी नै खुलेर बोलेको थियो। राधेश्यामलाई ती कुनै पनि कुराहरूप्रति चाख लागिरहेको थिएन। एक हिसाबले हेर्दा सबै कुराप्रति वितृष्णाभाव जागिरहेको थियो। तर सुरेन्द्रको आग्रह टार्न नसकेपछि ऊ बस्यो र त्यसपछि ती दुवैजना खान र पिउनमा व्यस्त रहे।
“सुरेन, सात समुद्रपारिको यो बिरानो मुलुकमा तिमीले मलाई आश्रय दियौ। त्यसको लागि तिमीलाई धन्यवाद छ। तर हेर साथी, म यसरी शरणार्थी भएर कति दिन बसुँ? मलाई पनि कुनै न कुनै काम त खोज्नु पर्‍यो नि।” अल्कोहलको अलिकति मात्रा पेटमा परेपछि अल्लि बढी निर्धक्क भएर बढो भावुक शैलीमा राधेश्यामले भन्यो। त्यसका कुरा ध्यानपूर्वक सुनिसकेपछि प्रत्युत्तरमा सुरेन्द्रले भन्यो :
“हेर राधेश्याम, तिमी एकजना प्रोफेसर मान्छे । जस्तोसुकै काम गर्ने कुरा पनि भएन। तिम्रो योग्यताअनुसारको काम पाउन सम्भव पनि छैन। जस्तोसुकै काम गर्ने हो भने म तिमीलाई भोलिनै काममा लगाउन सक्छु।” सुरेन्द्रले बिना हिच्किचाहट भन्यो।
सुरेन्द्रका कुराले उसका मनमा अलिकति आशाको टुसो पलायो, तर त्यो जे पनि काम गर्नका लागि मानसिक रूपबाट तयार भैसकेको थिएन। तथापि उसले त्योसित सोध्यो, “जस्तो पनि कामको अर्थ के हो?”
“मैले एउटा इन्डियन रेष्टुरामा तिम्रालागि अलिकति कुरा गरेको छु। गर्ने नै हो भने भोलि म कन्फर्म गर्न सक्छु।” सुरेन्द्रले त्यसको मन छाम्न खोज्यो। राधेश्याम निकै दोधारमा पर्‍यो। त्यसको एउटा मनले भन्यो, मर्नु भन्दा बौलाउनु निको भन्छन्, हुन्छ भनौ कि त?तर त्यसको अर्को मनले त्यो कुरा पटक्कै स्वीकारेन। बाघले घाँस खाएको कुरा उसलाई थाहा थिएन। हुनु र नहुनुको द्वन्द्वमा फँसेको त्यसको मनले त्यो काममा हात नहाल्ने निधो गर्‍यो।
“त्यस बाहेक अरु क्यै हुन सक्तैन?” राधेश्यामले सुरेन्द्रको अनुहारमा आँखा अड्याएर सोध्यो।
“सेक्युरिटीमा जाने? तर त्यसका लागि पनि पहिले तिमीले अल्पकालीन तालिम लिनुपर्छ। अनि काममा लाग्नुपूर्व तिमीले पिन अर्थात् पर्सनल आडेन्टिफिकेशन नंबर लिइसक्नु पर्छ। सुरुमा बेलायती समाजमा एड्जस्ट् हुनका लागि अलि झन्झटै छ।” सुरेन्द्रले यस पटक अलि बढी उदार भएर कुरा गरिरहेको थियो।
भोलिपल्ट सुरेन्द्रले राधेश्यामलाई सेन्ट्रल लन्डन घुमाउन लग्यो। तिनीहरू भूमिगत रेलमार्ग भएर हाइडपार्क स्टेशन पुगे। रेलबाट बाहिर निस्केपछि मुसाका दुलाजस्ता सुरुङ्मार्ग हुँदै र दायाँ बायाँ घुम्दै लामो विद्युतिय भरेङ्बाट माथि उक्लेपछि तिनीहरू भूमिगत स्टेशनबाट बाहिर खुला आकाशमा निस्के। तिनीहरूले देखे, दाहिनेतिर भर्खर बढारकुढार गरेर राखेजस्तो एउटा विशाल चउर फैलिएको थियो र त्यसको बीचबीचमा यो छेउदेखि त्यो छेउसम्म पुग्ने चिल्ला फराकिला सडकहरू थिए। छुट्टी मनाउन त्यहाँ पुगेका मानिसहरूका झुन्ड यता उता छरिएर हिँडिरहेका थिए। सुरेन्द्र र राधेश्याम तिनीहरूझैँ नै मानिसहरूका हुलमा मिसिएर पार्कभित्र प्रवेश गरे।
झन्डै पन्द्र मिनेटको पैदलबाटो हिँडेपछि तिनीहरू पार्कको उत्तरपूर्वी कुनामा पुगे। त्यहाँ, गिटी ओछ्याइएको एउटा खस्रो पिचतिर औंल्याउँदै सुरेन्द्रले राधेश्यामलाई स्पिकर्स् कर्नर देखायो। त्यसपछि तिनीहरू त्यहाँबाट निस्केर बकिङ्घम प्यालेसतिर सोझए। तिनीहरू जताजता गएपनि राधेश्यामको मनमा भने द्वन्द्वको एउटा ठूलै भूमरी चलिरहेको थियो। तिनीहरूले बेलायतकी रानीको दरबार अगाडिपट्टिको स्क्वायरमा अबस्थित फाउन्टेनको किनारामा बसेर केही स्न्याप फोटो खिचे। त्यसपछि तिनीहरू सेन्ट जेम्स पार्कतिर लागे। त्यो पार्कको बीचमा रहेको लाम्चो आकारको सानु तलाउ र त्यसको किनारको चउरमा थरीथरीका हाँसहरू खेलिरहेका थिए। मानिसहरू प्रकृतिका बरदान ती चराहरूको उन्मुक्त खेल मन्त्रमुग्ध भएर हेरिरहेका थिए। केही पर्यटक भने त्यो मनमोहक दृष्यलाई आफ्ना क्यामरामा लुकाउन तँछाडमछाड गरिरहेका थिए। ती दुवै पार्कको बीचतिर पुगेपछि एकछिन अडिएर पछाडितिर फर्केर हेरे। खैरो रङ्गको बकिङ्घम प्यालेस निकै सुन्दर देखियो। त्यसपछि तिनीहरूले पूर्वतिर फर्केर हेरे। लन्डन आई थेम्स नदीको पूर्वी किनारामा उभिएर विस्तारै घुमिरहेको थियो।
सेन्ट जेम्स पार्कबाट बाहिरिएर ट्राफलगर स्क्वायर पुगेपछि एकछिनसम्म घुमघाम गरेर तिनीहरू टेन डाउनिङ् स्ट्रिटको बाटो हँुदै लन्डन ब्रिजतिर लागे। केही माथि पूर्वतिर टावर ब्रिज, केही तल पश्चिमतिर पार्लियामेन्ट स्क्वायर। थेम्स नदी त्यसका दुवै किनारामा भीमकाय बिल्डिङ्हरू बोकेर मन्द गतिमा बगिरहेको थियो। त्यै समयमा तिनीहरूले क्वीन एलिजाबेथ सेइलिङ् म्युजियम नाम दिइएको सेतो रङ्गको एउटा पुरानु तर निक्कै ठूलो जहाज थेम्स नदिको पश्चिमी किनाराको सतहमा निश्चल तैरिरहेको देखे। थेम्स नदीमा खुला छत भएका अरु ससाना पानी जहाजहरू पनि पर्यटक बोकेर ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए।
रहँदा बस्ता डेड महिना समय त्यसै चिप्लिएर गएछ। त्यो अबधीमा राधेश्यामको मन छट्पटी र बेचैनीमा तड्पिएर निकै बोझलो बनेको थियो। उसले अब राम्ररी बुझसकेको थियो, लन्डन मानिसहरूका लागि एउटा स्वप्न–सन्सार थियो, तर उसलाई भने त्यो केही पनि लागेन। त्यसका मनमा त्यसको घर–सन्सार, त्यसका स्वजनहरू, त्यसका आफ्ना साथीभाइ र आफ्नो गाउँठाउँ, त्यहाँको आत्मिय भाव र याबत् चिज असाध्यै प्रिय लागे। ती सबै कुराहरूले घरिघरि आएर त्यसको मन चिमोट्न थाले। सुरेन्द्रको परिवार पनि नेपालमा छुट्टी मनाइसकेर अब चाँडैन लन्डन फर्कने कुरा उसले सुरेन्द्रबाटै सुनिसकेको थियो। उसलाई लाग्यो, उसका भविस्यका दिनहरू अवश्य पनि सरल हुने छैनन्। धेरै सोच विचार गरिसकेपछि उसले घर फर्कने निर्णय गर्‍यो र फिर्ती टिकट कन्फर्म गर्नका लागि टिकट बुकिङ् एजेन्ट अफिसमा फोन गर्‍यो।
एक दिन सुरेन्द्र अगिपछिको भन्दा केही छिटो घर फर्क्यो। ऊ घर पुगेपछि देख्यो, राधेश्यामले उसको लगेज कसिसकेको थियो। त्यसको त्यो चाल देखेर ऊ दङ्ग पर्‍यो।
“के हुँदै छ राधेश्याम? उसले छक्क परेको मुद्रामा उसलाई प्रश्न गर्‍यो।
“भयो सुरेन। मलाई पुग्यो। म आज जाँदैछु। सक्छौ भने मलाई एयरपोर्टसम्म पुर्‍याइदेऊ।” त्यसो भनिरहँदा त्यसको स्वर गंभीर तर दृढ थियो। उसले बिस्तारै भावुक मुद्रामा थप्यो : “म मेरा प्रियजनसँगै दुःखसुख गर्दै मेरै माटोमा मर्न चाहन्छु। भो, भयो, मलाइ यहाँको यो बैभव चाहिएन। मलाई त यो चकाचौध भन्दा मेरै गाउँघरको सरलता राम्रो लाग्यो। म यहाँको यो बिरानु बाताबरणलाई, यो बैभवलाई यहीँ छाडेर जाँदैछु।” त्यसो भनिरहँदा राधेश्याम निकै शान्त र दृढ भैरहेको जस्तो आभास भयो सुरेन्द्रलाई।
हिथ्रो विमानस्थलको डिपार्चर गेटबाट भित्र छिर्ने बेलामा ती दुवै साथीहरूले एक–अर्कालाई अङ्कमाल गरे। सुरेन्द्रका आँखाबाट अनायासै आँसु झरेछ, त्यो देखेपछि राधेश्यामले पनि उसको मन थाम्न सकेन। अघि भर्खरसम्म जून छरिएको त्यसको अनुहारलाई पनि कालो बादलले ढपक्कै ढाक्यो। त्यसका आँखा रसाए। त्यसले बलैसान्ती त्यसलाई दबाउने प्रयत्न गर्‍यो र हात हल्लाउँदै इमिग्रेशनको बाटो लाग्यो।
रातको लगभग दश बजेको हुँदो हो, कतार एयरवेजको बोइङ् जेट बिमान झन्डै चार सय यात्रुहरू बोकेर बेलायतको आकाशलाई चिर्दै लगातार दक्षिण–पूर्वतिर हानियो।
४ मार्ग २०६५
धापासी ७, काठमाडौं।
Posted in Harihar Khanal
Tagged Harihar Khanal - Sunaulo Sapana Ra Andhyaro Galli Harihar Khanal's Nepali Story Sunaulo Sapana Ra Andhyaro Galli Literary work of Nepali Story Writer Harihar Khanal Literatures of Nepali Story Writer Harihar Khanal Nepali Author Harihar Khanal Nepali Katha Nepali Katha Sunaulo Sapana Ra Andhyaro Galli by Harihar Khanal Nepali Kathakar Nepali Kathakar Harihar Khanal Nepali Rachanakar Kathakar Harihar Khanal Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Harihar Khanal Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Harihar Khanal Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Sunaulo Sapana Ra Andhyaro Galli by Harihar Khanal Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Harihar Khanal Sahityakar Harihar Khanal Ka Nepali Katha Haru